HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Caawa: Paul Pogba oo Ka Hadlay Khilaafka Ole Gunnar iyo Hakinta Heshiiskiisa, Ac Milan oo Saxiix Sameysay iyo Qodobo kale
October 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Bayern Munich ayaa si dhow isha ugu haysa xiddiga Napoli ee Victor Osimhen, 22-sano jirkaan ayaa isku calaamadiyay inuu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu sareeya Yurub, waxaana uu u muuqdaa inuu u dhaqaaqi mustaqbalka Kooxo Kale .sida laga soo xigtay Calciomercato .
Newcastle ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo xiddiga Bayer Leverkusen Florian Wirtz, Xiddiga da’da yar ee Jarmalka ayaa ku jira radar kooxo badan oo sare sida ay ku warameyso Bild .
Lucien Favre ayaa ugu cadcad inuu Steve Bruce ka bedelo tababaraha Newcastle United, Marc Overmars ayaa sidoo kale laga yaabaa in kooxda Premier League ay keento door agaasime isboorti, iyadoo garabka hore ee Arsenal uu seddex sanno ku qaatay England. Sida Laga soo xigtay Sport Bild
Edson Alvarez ayaa mustaqbalkiisa fog u hibayn doona Ajax Arbacada, isagoo u saxeexi doona heshiis dhacaya 2025, sida laga soo xigtay VI.
AC Milan ayaa xaqiijisay saxiixa Noa Selimhodzic, Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa kaga soo biiray Maccabi Emek Hefer, waxaana uu ogolaaday heshiis dhacaya 2024, iyadoo 18 jirkaan loo gacan geliyay funaanada No.17. Goal
Tottenham ayaa boos xoogan ugu jirta saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Bayern Munich Corentin Tolisso, Juventus iyo Inter ayaa sidoo kale lala xiriirinayay 27-sano jirkaan, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport
Barcelona ayaa ku raad joogta daafaca dambeedka midig ee Monaco Caio Henrique, Kooxda reer Spain ayaa horeba u samaysay baadhitaan ku saabsan helitaanka 24 jirkan, waxaana laga yaabaa inay dalab rasmi ah soo bandhigto bisha Janaayo.sida laga soo xigtay AS .
Inter ayaa wadahadalo kula jirta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sampdoria Morten Thorsby, Simeone Inzaghi ayaa doonaya inuu ku xoojiyo safkiisa. sida laga soo xigtay Calcio Mercato
Paul Pogba ayaa ka jawaabay wararka sheegaya in uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo tababaraha kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer isaga oo sidoo kale sheegay in uu joojiyay wadahadaladii heshiis kordhinta ee kooxda.